Kune akawanda emitambo isinganzwisisike inouya kuPC gore rino uye kupfuura. Kubva kunotevera katatu-Iyo mitambo kuenda kune rakakura hyped matombo, pane zvakawanda zvekutarisira mberi, chero chinhu chako chinofarira mutambo.
Chero ipi yako yesarudzo yesarudzo - Steam, Epic, Uplay kana Chibviro, kune mizhinji yemitambo mitsva yePC yekuwedzera pane yako wishlist zvakare. Iyi mitambo mitsva inosanganisira kubuda ropa-mutsetse mazita ne ray kutevedzera kugona, pamwe nekudzokorora kune ako epamusoro RPGs, vanopfura uye co-op tenzi.
Takatora mamwe emhando yepamusoro, kusanganisira ma trailer ekuti unakirwe - saka gadzirira chikwama chako uye chako chekunatsa.
Zuva rekuburitsa: 18 August 2020
Iyo inotevera yekuvandudza kuMicrosoft's Flight Simulator nhepfenyuro iri kuuya muna 2020. Nevimbiso ye4K HDR maficha anoonekwa uye zvese kubva kugehena ndege kuenda kune imwe-jets jets kusvika zip nezve mukati. Ndege Simulator inovimbisa vatambi rusununguko rwekugadzira yavo yega ndege kuronga uye jet kubva chero kupi zvako munyika, kubhururuka masikati nousiku kunopesana nemamiriro ekunze ekunze.
Zuva rekuburitsa: 27 August 2020
Type: Nhoroondo inofambiswa inonakidza
Publisher: Xbox Game Studios / DONTNOD Varaidzo
Ona nzvimbo iri pamutemo/Zvione pane Steam
Kubva kuchikwata chiri kumashure kwehupenyu hwakanyanya-hunonzi hupenyu hweStrange franchise kunouya imwe rondedzero inotyairwa netambo mune fomu ye "Ndiudze nei". Mutambo uyu wakaiswa mudhorobha diki muAlaska nenzvimbo dzakatenderedza mapatya maviri aine hutano hwehudiki. Uyu zvakare "wekutanga anotamba videogame gamba kubva kune huru studio uye muparidzi ari zvakare transgender". Tarisira nyaya yakapfuma uye inorondedzera yekurondedzera pano.
Zuva rekuburitsa: 28 August 2020
Type: Turned based strategy / RPG
Publisher: inXile Varaidzo / Yakadzika Sirivheri
MuWasteland 3 tariro yeArizona iri mumaoko ako. Iwe uchave uchitamba Renje reRanger, uchirwa kurwa kurasikirwa kuti uchengetedze wako anodiwa Arizona ari mupenyu. Paunenge uchirwisa nzira yako kuburikidza neine renje rinotyisa iwe uchafanirwa kuvaka zvigadziko, dzidzisa vatsva kutora uye kudzingira kunze kwezvakakukomberedza.
Nyika iri kubvarurwa nehuwori, mapoka anorwa, mapoka anopenga, masangano emapoka uye nezvimwe. Chokwadi ichava kurwa kwakaoma. Nhau dzakanaka ndedzekuti, Wasteland 3 mutambo-wakasungirwa mutambo zvekuti haugone kungotamba mune imwe chete-mutambi asi mune co-op mode zvakare.
Squading kumusoro iwe uchakwanisa kudzora matanhatu maRanger akagadziridzwa neakadzika akaiswa kune yako wega playstyle. Iko kudzvanywa kuri kuponesa yako inodiwa nyika! Wasteland 3 yave pedyo kusunungurwa uye ikozvino pane trailer itsva yekunakidzwa.
Simba Sam 4: Planet Badass
Zuva rekuburitsa: August 2020
Type: FPS chiito-mutambo
Sense Sam 4: Planet Badass inoiswa "kutonga zvinyorwa zvechinyakare" nekutora fomu yechinyakare yechikoro munguva itsva. Tiri kutarisira zvimwe zvakafanana uye kuuraya kubva kune ino inotevera gadziriso neakakwira-adrenaline kurwa, pamusoro-iyo yepamusoro-soro, kurwisa kwakanyanya kupisa kwezvombo uye zvimwe zvakanyanya kunze. Kuvimbiswa kwepamhepo vatambi vakawanda uye co-op modes zvakare kunofanirwa kuita kuti mutambo uyu uve bhiriji rakazara kutamba pamwe neshamwari.
Mazhinji ehumhondi hwekuuraya mayhem hunowedzera mune ino.
Crusader Madzimambo III
Zuva rekuburitsa: 1 September 2020
Type: Nhoroondo yenhoroondo / RPG
Crusader Kings III iri kuuya. Ikutevera kune imwe yeanonyanya kufarirwa zano mitambo yenguva yedu. Iyi yakarehwa neteki yezano mutambo uko iwe uchange uchitungamira imba yako kuburikidza nemazana emakore, uchibata nemhando dzese dzezvinhu kubva kunofambi kuenda kune vapfumi anomukira uye zvimwe zvakanyanya kunze.
Type: RTS Maitiro
Publisher: Yakadzika Sirivheri
Kukohwa kwesimbi iRTS yakaiswa mune imwezve nzvimbo iri kutora nzvimbo mushure mekupedzisira kweHondo Huru.
Iwe uchave uchitamba panhandare yehondo iyo inoshamisika neye gielpunk mechs uye inoshamisa uye inoshamisa tekinoroji.
Zuva rekuburitsa: 4 September 2020
Type: Superhero chiito-chiitiko
Yakagadziriswa neCrystal Dynamics (timu iri kuseri kwemitambo yeTomb Raider) uyu mutambo mutsva weMarvel unotarisa panguva iyo maAvenger adzingwa asi ave kudiwa kuponesa nyika. Tora kutonga kwechikwata chinotyisa kwazvo chepasi rose kuponesa pasi.
Uyu wechitatu-munhu, chiito-mutambo mutambo ne "yepakutanga, cinemaatic nyaya”Inotamba mumaviri mese-mutambi nemushandirapamwe. Iva Vagadziri uye chengetedza Pasi kubva kune yayo huru kutyisidzira.
Kana iwe uchinge wa-oda unogona kuwana mukana kune beta iwe uchimirira kumisikidzwa kuzere. Kana usati waraira-kare iwe unogona kuramba uchiedza beta panguva yakavhurika beta kutanga 21 Nyamavhuvhu.
Zuva rekuburitsa: 25 September 2020
Type: Isu simulation
Publisher: Kalypso Media Dhijitari
Port Royale 4 ndiwo mutambo unotevera mune inonyanya kufungwa yePort Royale series. Uyu mutambo wakagadzirirwa kupa yakaoma hwehupfumi simulation ruzivo ine hutano musanganiswa wechirongwa. Gara muzana ramakore rechigumi nematanhatu muCaribbean, iwe uchave uchirwira icho nekuda kwekukurisa kwemakungwa.
Uku kutsva kutsva kuri kuvimbisa kwakadzama kuvaka-guta chiitiko pamwe neakagadziridzwa gameplay, mana single-player nhandare uye nezvimwe.
Mafia: Tsanangudzo Shanduro
Mafia imwe yaive yemitambo yedu yaaifarira kwazvo mumasikati ayo. Mutambo wekuita-mutsva wakafanana neGTA chete yakaiswa munyika yeurky yemhomho.
Iye zvino Mafia yepakutanga iri kuveredzwa kubva pasi kumusoro neyezvino mifananidzo Nepo Mafia II inogona kunge ichangobva kudzokorodzwa, 2K inoreva kuti Mafia's Defitive Edition ichave chinhu chakakosha.
Zuva rekuburitsa: 2 October 2020
Type: Nzvimbo sim
Publisher: EA Mitambo
Kana iwe uchigara uchirota nezve Star Wars mutambo uyo wakangoita nzvimbo-yakagadzirirwa imbwa kurwa uye yakakura nzvimbo bato saka kurotazve hakuzi kunge kuri kuuya. Star Wars: squadrons anovimbisa mashanu vs mashanu imbwa kurwa mu X-mapapiro uye TIE varwi pakadzika nzvimbo. Iwe unenge uchirwira mativi ese ari singleplayer mushandirapamwe, akawanda uye kana iwe uine michina mune chaiwo mhezi zvakare. EA zvakare iri kuvimbisa muchinjiko-kutamba rutsigiro zvakare.
Zuva rekuburitsa: 29 October 2020
Type: Vhura-nyika sirivha
Ona nzvimbo iri pamutemo/Zvione pane Ubisoft
Imbwa Dzekutarisa: Hondo ichave yakagadzwa muLondon - guta rakanetseka rakapwanywa nemabatiro ehurumende yeudzvanyiriri. Basa rako nderekuvaka mauto anopikisa kusunungura guta uye kusunungura nyika.
Unyanzvi hwese hwekuzevha hunyanzvi, hunyanzvi hwekugona uye sarudzo dzekurwisa dzakazarukira iwe, uyezve iwe uchave nekugona kutora munhu chero munhu waunoona munyika kuti ajoine timu yako. Wese munhu waunoona arikumusoro uye anouya nekwavo backstory nehunyanzvi. Kunyangwe kuve munhu ane hunyanzvi hwekurwira kana kungokwanisa kutsvedza usingaonekwe kuburikidza nemigwagwa mune kushamisika kwemukadzi wechikuru. Zvirokwazvo ichave mutambo wakasiyana zvichienderana nekuti ndiani ari kutonga.
Zuva rekuburitsa: October 2020
Type: Mujaho Sim
NeDhivhiri 5 zvakanyatsojeka kuti maCodemasters ari kuseta iyi neiyo yakawanda arcade-senge inonzwa kuyeuchidza kweDhivhizoni Showdown. Pasina zvakakomba rallying (ala Dhivha Rally) uye yakawanda-kubvaruka kukwirira-octane kunakidzwa. Zvichiri kutaridzika senge kumwe kupaza kubuda kweiyo Dhivhirioni mhete asi.
Ine turera yazvino, Codemasters yakaratidza izvo izvo vateveri vangatarisira kubva mumutambo, kusanganisira yakawanda yakasiyana siyana mota kupfuura chero mutambo weDhibhiri (13 makirasi akazara) uye mamwe mafomu emitambo zvakare. Landrush, Rally Raid, Ice Breaker, Stampede, Path Finder, Sprint uye Ultra Cross zvese zvinoratidzika semujaho modes uye dzinovimbisa akawanda akasiyana-siyana kana pasina chimwe chinhu.
Zuva rekuburitsa: Zuva 2020
Ona nzvimbo yepamutemo
MaProjekiti Cars yakagadzirirwa kudzoka uye kuvimbisa kupa "yekupedzisira mutyairi rwendo" nemotokari dzinopfuura mazana maviri, maturu zana nemakumi mashanu, mwaka wakasimba nemhedzisiro yemamiriro ekunze, zviratidzo zve 200K uye "yepamusoro-mukirasi" VR inotsigirawo.
Kupisa Mhete: Pirate Hondo Royale
Zuva rekuburitsa: Q3 2020
Type: Battle Remake
Publisher: Iceberg Inopindirana
Kana iwe uchifunga kuti YeMitambo Royale mitambo yese yakada kufanana, ipapo Kupenya Sails kunogona kuve mhinduro kuminamato yako. Hondo Royale mutambo kwaunosvika kuti ugadzire yako pirate ngarava uye kurwa kunze pamusoro pemakungwa akakwirira. Hatigone kubatsira asi toona kufanana ne Gungwa Mbavha, asi ichiri kutarisa yakakura.
Zuva rekuburitsa: 18 November 2020
Type: Vhura-world RPG
Read more: Cyberpunk 2077 yekutanga ongororo: Iyo inoshamisa yakanyanya kuvhura-nyika RPG yatakaona kusvika kure
Cyberpunk 2077 zvinosuruvarisa zvakasundidzirwa kumashure kaviri zvino. Nguva dzinosiririsa. Nekudaro, ichi chingave chinhu chakanaka nekuti chinopa vanokudziridza nguva yakawanda yekupa mutambo kupururu yakakodzera.
Iyi inotevera yakavhurika-yenyika RPG kubva kune inoshamisa CD Projekt Red - timu iri shure kwe awesomely yakakurumbira Witcher 3. Mutambo mutsva uyu une zvakawanda zvevimbiso uye patakazviona paE3 ndokuratidzwa kunze mukati iyo gameplay trailer, takapepetwa chose. Kunyanya kunyanya kana trailer yakadonha nechitarisiko naKeanu Reeves. Iye zvino taona zvakawanda mune nzira yekuseredza kusanganisira rwizi rwunoshamisa rwepamoyo ine zvakawanda zvemashoko kuti ufarire.
Zuva rekuburitsa: 2020
Iko kweAassassin's Creed kuri kuuya neViking theme. Vatambi vachange vachitora chinzvimbo chaEivor, murwi ane simba uye mutungamiri wemadzinza. Iwe uchave uchifambisa nhare dzevavengi, uchiongorora nyika yakavhurika inoshamisa uye uchiwana nzvimbo muValhalla zvakare.
Zvirokwazvo kuchinja kunonakidza kwegwara redhisheni uye yatiri kutarisira.
Godfall munhu asinganzwisisike. Iyo turera uye chiratidzo hazvipe zvakawanda kure nezvazvo. Zvimwe kunze kwekuti mutambo uchasanganisira dzimwe nhumbi dzekupfeka nezvombo uye hwakawanda hwekupamba. Kana iwe uchida loot uye maRPG, saka iwe unofanirwa kuve uneshrog.
Mhedza Yekukudzwa: Pamusoro uye Kupfuura
Kana iwe uine gomba rinorwadza mauri mauri kweMedal yeKukudza yaimbove nhau dzakanaka! Nekuti Respawn Varaidzo iri pakati pekugadzira imwe kubuda muHondo Yenyika II, pasi peMedal of Honor banner asi muVR. Izvo izvo, iwe unenge uchitamba semukuru weOSS, uchipinza Nazi Europe uye uchipisa muvengi mukati.
Type: Kufungidzira RPG
Iyo Falconeer inyowani nyowani yekufungidzira RPG inouya muna 2020. Uyu mutambo mutsva unorega iwe uchitora kutonga kweakabata zvombo zvetsiva uye kuita zvemberi kurwa imbwa kumusoro kwedenga reGreat Ursee.
Iwe uchave uchirwisa kunze neanoshamisa vavengi pamusoro penyika, gungwa nemhepo nezvombo zvinoparadza zvaunazvo iwe.
Publisher: Imwe Indie
Hazel Sky yakazarurwa kuPaX East uye inoratidza mutambo wekuita-mutambo waunomhanya-mhanya seShane, weinjiniya wechidiki ari kuyedza kugadzirisa mimwe michina inobhururuka. Zvirokwazvo mutserendende unotarisa indie mutambo.
Publisher: 3D Realms / Interplay
Kana, sesu, iwe wakura zvakakwana kuti urangarire 1999's Kingpin: Hupenyu hweMutsotsi, saka iwe unogona kunge uchifadzwa kunzwa kuti mutambo wekupokana uri kuwana remaster gare gare gore rino. Iyi reboot ichawedzera 4K uye ultrawide rutsigiro, pamwe neyezvemabra gameplay, zvakadaro inochengetedza yakafanana yekiriniki inoyevedza. Tiri kutarisira kusunungura mazuva akaomarara.
Occupy Mars: Iwo Mutambo
Ona pane Steam
Kubva kune vanhu vamwe chete vakatitengera Thief Simulator, Farm Manager 2018 uye iyo Mechanic simulators kunouya mutambo mutsva uko chinangwa chako chiri chekurarama paMars.
Mutambo mutsva uyu unoratidzika kunge uri wehunyanzvi, wakasvinura-nyika, sandbox inokomberedza kutenderera kweMars. Ichakubvumidza iwe kuvaka uye kusimudzira chigadziko chinosanganisira zvese kubva mukukura zvidyarwa kusvika pakufunda nzira yekugadzira oxygen uye kupona mamiriro ekunze eMars.
Type: Akareji RPG
Publisher: Toplitz Zvigadzirwa
Dzokera kune iyo yakapusa nguva mune ino yakavhurika-yepasi RPG yakatarwa mumazera epakati. Vaka imba, rima zvirimwa uye edza kurarama. Uyu mutambo unovimbisa "chaiye" nyika yakavhurika, ine mwaka yakazara, chaiyo-yenyika mamiriro ekunze, 18 dzakasiyana-siyana zvivakwa mitundu uye ese marudzi enjodzi dzemhoteredzo kuti akwanise kubata.
Type: Co-op Bhowa
Publisher: Square Enix Kunze Studios
Kubva kuchikwata kuseri kweGears dzeHondo Kutongwa neBulletstorm kunouya nyowani nyowani co-op shooter ine rima resa-fi vibe.
Mutambo uyu wakagadzirirwa kuve mutambo we-co-op nevatambi 1-3 vanokwanisa kudzikira mukati nekubuda mumutambo chero nguva.
Iwe uchave uchigadzira yako yekunze Yekunze yekufamba nepasipasi ine hutsinye, kuburikidza nemasango uye shantytown, masango uye makomo nemarenje zvakare. Outriders anovimbisa "asingaverengeki maawa emutambo" uye wakanyanya pfuti zvakare. Zvirokwazvo, imwe yekunakidzwa nemapuru ako.
Type: Cyberpunk chiitiko chekuita
Publisher: Zvese zvirimo! Mitambo
Ghostrunner ndeye inonakidza kutarisa cyberpunk yakagadziriswa mutambo unouya gore rino. Denga repasi rose rakamanikidza zvakasara zvevanhu kuita shongwe huru, zvinoita kunge yekupedzisira yasara pekugara. Urombo, nyonganiso nemhirizhonga zvakazara. Iwe unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchirwisa nharaunda nharaunda kuti uvhure zvakavanzika zveshongwe uye nekwaakabva.
Kerbal Space Chirongwa 2
Type: Space simulation / sandbox
Publisher: Yakavanzika Chikamu
Kerbal Space Chirongwa yadzoka, ine sequel kune inonyanya kufunga nezve space-ndege simulation inouya imwe nguva muna 2020. Kana iwe uchinakidzwa ne sandbox kunakidzwa kwemutambo wekutanga, saka unosungirwa kuwana mutambo mutsva kuputika. Iko kuvimbiswa kwezvikamu zvitsva zvinonakidza, colony kuvaka, interstellar kufamba uye kwakawedzerwa modding pamwe nekufema-kutora mavhizavhodhi uye neyakawanda systemer system zvakare.
Type: Chikamu chePlatform
Publisher: Zvakapetwa kaviri
Double Fine studio dzaive E3 2019 kuratidza off gameplay rutsoka Psychonauts 2, padivi pezvakaitwa kuti kambani iri kubatana neXbox Game Studios.
Razputin Aquato yadzoka kuma Psychonauts 2. Ino nguva yakatenderedza Razputin iri kunyura mukati maPsychology uye pane zvakawanda zvezviitiko zvekutarisira.
"Psychonauts 2 inotaura nyaya yaRazputin Aquato, ane chipo checobat ane masimba ehupfumi, apo anozadzisa chinangwa chake cheupenyu-hwekuve mudzidzi wepfungwa wepasi rose. Mune mamwe mazwi, Psychonaut. Raz ajoina iyo Psychonauts panguva ine njodzi: mole yakapinda musangano uye iri kuronga kumutsa nhoroondo vane hutsinye hwakanyanya hwepfungwa psychic villains. Asingazivi kuti ndiani wokuvimba, Raz anofanira kupinda munhoroondo yeVarapi vepfungwa, uye yake yemhuri yake, kurwisa madhimoni evaimbogovana.
Zuva rekuburitsa: Autumn 2020
Type: Isu RPG
Empire of Sin zano idzva RPG rakaiswa mune isina hutsotsi tsotsi underworld ye1920s Prohibition-era Chicago. Uyu mutambo mutsva mutsindo unofambisirwa, hausi-wakafuridzirwa mutambo unoitika mukukwasva kwe20s. Iwe unenge uchitarisa zvakanyanya pakuvaka yako humambo hwematsotsi uku uchitsvaga guta rinorarama uye rekufema rakakukomberedza. Kukurudzira, simba uye hutano dhidhi yehuchiro ichave kiyi yekupona pano. Shongedza kuti upone, kunze-pfuti uye kunze-kupfura kukwikwidza uye iwe unokurumidza kusvika kumberi.
Rainbow Tanhatu Quarantine
Type: 3-mutambi anotsiva co-op FPS
Yakasimba kunze kweE3 2019 inouya iyo inoita seinopepera-yeRainbow Siege Outbreak mode iyo yakaita seyakaonekwa muna 2018. Uyu mutambo wakamira wakamisikidzwa mune ramangwana rinotevera.
Iyo vhezheni yakachinjika yatorwa iri kutapudza vanhu nekutyisidzira vanhu. Chikwata cheRainbow Six chiri pachinangwa chekuchengetedza nyika - kuchirwisa kunze kutarisana nenzvimbo uye kuyedza kurarama usingafungirwe.
Type: Chiitiko-chiitiko RPG
Publisher: Techland Kuburitsa
Pre-order paFanatical/Zvione pane Steam
Kufa Chiedza 2 kwakatanga kwaziviswa paE3 2018, iko zvino kwaratidzwa zvekare paE3 2019. Mitambo yeZombie yave kutopedza ikozvino, asi isu tichavada. Zvino zviripo demo yemaminetsi makumi maviri neshanu kuyamura nzara dzangu.
Isu takavawo nezvakawanda zvakanaka zvekutaura nezvazvo Chiedza chekufa, saka tinofara kubvuma kuti tinonakidzwa nekuona izvo zvinotanga-munhu parkour kunakidzwa nekubuda kutsva kuri kuchengeta. Kufa Chiedza 2 zvakare kunopikira nyika inochinja zvinoenderana nesarudzo dzako, saka pane zvakawanda kumutambo uyu pane kurova zombies uye kupona. Iyo trailer nyowani inoratidza kurwira haisi yekungopesana nevadzimudziri vehuropi, asiwo mapoka evarwi vanorwira kuti ave hukuru. Hatigoni kumirira kuti tisvike mukati.
Techland Publishing yakazivisa kuti iri kunonoka kutanga kweKufa Kufa 2 kuti inyatso zadzisa chiono chayo uye kuburitsa izvo zvaakavimbisa.
Type: Vazhinji vevakawanda
Publisher: Yakatemwa Banner Studios / Tripwire Inopindirana
Ona nzvimbo iri pamutemo/Zvione pane Epic Store
Isu takashongedza yekutanga Chivalry mutambo. Hondo inotyisa, ine ropa rakapetana neropa raikuona uchicheka misoro nemapakatwa akapamhama uye uchicheka vavengi vako nekupopota kwemarara.
Zvino nguva Mordhau irikuita mushe Steam, zvine musoro kuti uone Chivalry 2 ichiita kudzoka. Tichiri mumatanho ekutanga, asi neAlpha yekukanda, pane zvakawanda zvekufara nazvo.
Zuva rekuburitsa: Mahoridhe 2020
Publisher: Xbox Game Studios / 343 Maindasitiri
Halo Iyo Master Chief Kuunganidza iri kuita iyo PC yekufambisa pane imwe nguva munguva pfupi iri kuuya. Iye zvino tatorawo nhau dzekuti inotevera kuiswa kweateki ino zvakare ichave kuwanikwa yePC gamers.
Halo isingaperi ndiyo chitsauko chinotevera cheyenekisheni inoenderera mberi kubva kuHalo 5: Guardian nyayaline uye inovimbisa nzira yekuda uye isingatarisirwi yemutambo, inopihwa nein-all-new graphics graph. Halo haina kumbobvira yakataridzika zvakadaro.
Zuva rekuburitsa: Q4 2020
Publisher: VOID Inoshanda
Kugadzirira kana kuti kwete kuiswa kukuisa iwe mune shangu dze SWAT maofficial ane akangwara kupfura akagadzirirwa kukupa iwe uone ruzivo rwekuti zvakamira sei pakuva pamberi peye mapurisa ane njodzi. Pane mushandirapamwe-mutambi, PVP vatambi vazhinji uye nezvimwe. Iko kunoratidzika kuve kwakawanda nzira dzakasiyana dzekutamba, kusanganisira dzisiri-dzinouraya dzinosanganisira bhinzi bhegi repfuti uye zvimwe. Tiri kutarisira kubatika mune ino.
Zvakaipa Genius 2: Kutonga Kwenyika
Type: Isu Sim
Wakambozvibvunza here kuti zvainge zvakaita sei kana Gru anobva kuMainion film raive nemutambo wake wevhidhiyo? Izvi zvimwe zviri pedyo chaizvo sezvauri kuenda. Iyo yekutevera kune Evil Genius iyo yakaburitsa kumashure muna 2004 pakupedzisira iri kuuya. Iye zvino iwe unokwanisa kuvaka yako chaiyo, kuronga uye kuronga kunze kutonga nyika uye kunyange kudzidzisa uto revapambi vematsotsi kuita kuda kwako.
“Anogadzira vavaki-vanosevha vavaki iwe uri nyanzvi yekupamba! Gadzira hwaro hwako, dzidzisa vabatsiri vako, udzivirire mashandiro ako kubva kumauto eRuramisiro, uye uwane hutongi hwenyika! ”
Lego Star Wars: Iyo Skywalker Saga
Publisher: Warner Bros. Inofambidzana Varaidzo
Zvione pane Steam/Pre-order paFanatical
Kuda Star Wars? Iwe haugone kukwana zvakakwana kwaLego? Zvakadii nemutambo mutsva unovimbisa kugona kutamba kuburikidza nemafirimu ese Star Wars mumutambo weLego-based adventure?
Iwe uchave uine kugona kwekufamba kuenda kune chero nyika, mune chero akarongeka, chero nguva. Tichava kuenda kushanyira maWookie zvechokwadi.
Publisher: Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Anshar Studios
Gammec yakagadzirirwa kuve inonakidza cyberpunk RPG. Kutamba ino iwe unenge uri mune shangu dzemuchengeti wakasarudzika ane basa rayo kugadzirisa mhosva mukati mezvinoonekwa nyika. Mutambo mukati memutambo? Vagadziri vacho vanoti mutambo uchaenderana nesarudzo dzako paunenge uchitamba. Iko hakuna zvakare imwe mhinduro kune chero mamiriro, saka yakawanda sarudzo munzira dzekutamba.
Zuva rekuburitsa: 2021
Type: Turn-based zano
Kubva kuvanhu vakatenga yako Endless Space kunouya itsva nhoroondo zano mutambo uyo anokurega iwe kunyora zvekare nhoroondo. Gadzira yako pachayo budiriro uye wozoenderera kuburikidza nemazera. Kutamba Vanhu, iwe unenge uchitarisana nezvakakosha zviitiko zvemberi, uchiita budiriro yesainzi, uwane zvishamiso zvepasirese zvepasi uye nezvimwe. Zvese kuvaka mbiri yako wepasirese.
Hood: Zvemutemo & Nhoroondo
Publisher: Tarisa Imba Inoshanda
Hood: Outlaws & Legends iri nyowani hardcore PvPvE vatambi vakawanda vakagadzwa mune yepakati medieval. Mutambo uyu uchaona zvikwata zviviri zvevatambi zvichikwikwidza munyika ine njodzi kuyedza kubvisa heist - kuba pfuma inokosha kubva kuhutongi hunodzvinyirira - uku vachidzivirira magadhi anouraya neAI.
Saga raSenua: Hellblade 2
Zuva rekuburitsa: TBC
Publisher: Ichokwadi Ninja
Sua yaSenua: Hellblade 2 ndiyo inotevera kusvika ku2017's fantastic Hellblade: Chibayiro chaSenua. Chiitiko chepfungwa-chiitiko chine hupfumi uye yakasviba iyo yaive yakanyura kupinda mukupenga kuburikidza neViking Hell. Mutambo wekutanga waive uri mutserendende, saka isu tiri kutarisira zvimwe zvakafanana kubva pane yekutevera. Ino nguva ndeye yakasarudzika yePC uye Xbox Series X.
Mumumvuri Warrior 3
Type: Chiito-chiitiko FPS
Mamwe madhimoni anotsvaira runako kubva kuShivhi Yemurwi. Takagara tiri vateveri veiyi mitambo. Yakanaka mavara mifananidzo, rimi-mu-cheki kuseka uye yakawanda pew. Mvuri Hondo 3 inoita senge yakavimbisa zvimwe zvakafanana uye hatigone kumirira.
Zuva rekuburitsa: Spring 2021
Type: Yakakura Multiplayer / RPG
Publisher: Mitambo yeAmazon
Iyo inonakidza uye yakanaka yeMMO kubva kuAmazon Mitambo iyo ichaisa vatambi kubva kunjodzi dzenyika isinganzwisisike, varwi vanobva kune mamwe eras nevamwe vatambi zvakare. Nyika Itsva inovimbisa kuongorora ne "runako, njodzi, uye mukana munzira imwe neimwe".
Vampire: Iyo Masquerade - Bloodlines 2
Iyi inotevera kusvika ku2004 inotyisa yeVampire: Iyo Masquerade - Iyo Ropalines iri kuuya muna 2021. Mutambo wapamberi uyu yaive RPG nyanzvi yakarongedzwa izere nemampampu, rima alleyways uye nevapfumi mavara. Mutambo mutsva wakanyorwa nenjere dzekusika dzakafanana nekuseri kwemutambo uyo, saka tiri kutarisira zvimwe zvakafanana pano.
Iko kubhuroka kunonakidza kunonakidza zvakare:
"Wakarasikirwa muchiitiko chevampire kumukira, huripo hwako hunodzikisira hondo yekutengeserana kweropa raSeattle. Pinda mumubatanidzwa usingafadzi nezvisikwa zvinodzora guta uye kufumura hurongwa hunowedzera izvo zvakapinza Seattle muhondo yeropa yakavanzika pakati pemapoka ane masimba akasimba. "
New trailer vari kuuya nguva dzese dzemutambo uyu, kusanganisira yakajeka gameplay trailer kubva E3 uye zvino nyowani iri kuratidza RTX yakavandudza masidhiya yemutambo. Hatikwanise kumirira iyi.
Zuva rekuburitsa: Kuuya manje manje
Publisher: Iron Kuona
End Nyika yakarongedzwa kuti ive inonakidza yekutanga yekuwana mutambo unouya gare gare gore rino. Iyo inoshandisa inotendeuka-based play ichikubvumidza iwe kutonga kambani yehunyorove yekutsvaga pasi pegandanga.
Iko kune vimbiso yeyakavhurika-nyika inoitika iwe kwaunotora uye kusarudza mamisheni iwe aunotamba munyika ine destructible nharaunda iyo inosanganisira bullet kupinda uye zvimwe. Iyo inonakidza ballistics simulation system uye system yevavengi maitiro inofanira kuita iyi mutambo unonakidza wechokwadi.
Type: Horaiti yekushamisika
Kusekwa ndeyemuchadenga unotyisa mutambo wekusimudzira mukuvandudzwa neEbb Software. Yakatanga kurongwa kuburitswa muna 2018, asi ichiri kuoneka. Iyo yakafuridzirwa nemabasa a HR Giger uyo aive chikamu cheakakosha mimwe timu yeiyo firimu Alien. Iyo trailer zvirokwazvo inoratidza zvimwe zvinotyisa zviono uye musana-kutetemera mamiriro ayo maficha erudzi achada.
Zuva rekuburitsa: TBD
Type: Turn-based zano RPG
Publisher: Bhurawuza Iwe Mitambo
Phantom Brigade inguva yakatendeuka-yakagadziriswa RPG, iyo inovimbisa cinematic spin pane rudzi. Uyu mutambo uchavewo unotarisisa nezvekudzika kwemaitiro uye inotyairwa-inotungamirwa nyaya. Ichave mishando yako kutungamira Iyo Brigade kuburikidza neyakaoma-kurwira nhimbe kuti vatore nyika yavo.
Publisher: Quantum Kutendeseka Software Inc.
Dead Matter yave mukukura kwenguva pfupi ikozvino kuonekera paKickstarter. Uyu mutsva we zombie kupona mutambo uyo mavagadziri achaita sei “nemazvo” kururamisa mechanics ane kunakidza gameplay.
"Tine tarisiro yekugadzira iyo yekutanga zombie kupona mutambo neiko dhizaini yakaiswa mukuita kuti mutambo unakirwe kutamba, kukurudzira vanoita zvekunze gameplay nekupa vatambi vedu zvishandiso zvavanoda kuti vararame."
Type: MMO / Chiito RPG
Dragon Hound ndeye nyowani-inovhima MMO iyo parizvino iri mumabasa. Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvemutambo panguva yacho. Chatinoziva ndechekuti iri kugadzirwa neDevCAT, timu imwechete inotarisira Vindictus.
Uyu mutambo wakaratidzwa kure paGDC 2019 uine yakazara-pane chaiyo-nguva ray-yekutsvaga kunaka. Dragoni inokwira uye yakawanda yemihondo yepamhepo yakamirira neino zvinoita
Type: Sci-fi chiitiko chekushanyirana
Publisher: Vadivelu Comedy Nightdive Studios
Nightdive Studios yakarongedzerwa kugadzirisa uye kudzokorora iyo yeklasshi-fi yekushambadzira System Shoti pane imwe nguva munguva pfupi iri kuuya. Vagadziri vacho vari kuvimbisa mutambo mutsva uyo uri zvechokwadi kune wekutanga apo uchinge uchizorodzwa pamwe neazvino mifananidzo uye mutambo wemitambo.
Mafani eiyo nhevedzano achafara kunzwa iyo yekutanga inzwi mutambi ari kudzoka zvakare. Mutambo wepakutanga wakaburitswa muna 1994, saka iyi reboot inguva yakareba iri kuuya uye zvirokwazvo inofanira kuva inonakidza. System Shock 3 iri kuvandudzwawo, saka tatova nazvo kuti titarisire zvakare.
Zuva rekuburitsa: TBA
Type: Kutanga kuwana Hondo Royale
Publisher: PixelPizza Mitambo
Kwekupedzisira Man Kugara pamwe kwakanyanya kuseka Hondo Royale mutambo iwe waungamboona. Akapfeka zvakapusa akagara mumahofisi ehofisi akasvibira akashongedza mazino. Shotguns, ragdoll psychics uye inotsvedza pasi inosungirwa kugadzirira yakawanda shenanigans uye yakawanda hilarity.
Type: Space-yakavakirwa RPG
Starfield yakanyungudutswa neBethesda munaJune 2018 seyokutanga nyowani mumakore makumi maviri neshanu. Asi handiyo iyo inonakidza chikamu, Starfield yakaiswa kuve nzvimbo-yakavakirwa RPG ine yakawanda yekunakidzwa kunonakidza mukati yakadzika nzvimbo. Kunze kwaizvozvo, hatizive zvimwe kunze kwekufara.
Vakuru Mipumburu VI
Type: Vhura nyika RPG
Dzvanya kuti uone paFanatical
Vakuru Vakuru Mupumburu vateveri vakamirira vasingafungire kuti vateedzane neiyo Skyrim yezvingaite senge zvachose. Zvino isu pakupedzisira tine humbowo hwekuti Mukuru Mupumburu VI ari kuuya pane imwe nguva, isu hatongo ziva zvakawanda kupfuura izvo. Nguva dzinonakidza dzichiri mberi.
Type: Kupona kutyisa chiito RPG
Zvichiri mazuva ekutanga, asi pane vimbiso yekubuda pachena kweChipiri kuChitsuwa chechipiri - imwe zombie-yekuuraya rwendo rwatakadada patakatanga kuridza nezvePC.
Weapon kudhizaivha, yakajeka uye isingawanzo chitsuwa nzvimbo uye Zombies mune yekugeza zvipfeko, mutambo uyu waive nezvazvo zvese. Iyo trailer nyowani hairatidze zvakawanda, asi chaizvo zvinoita sekunge paine zvimwe zvehumwe nguva uye nguva dzakanaka.
Zuva rekuburitsa: TBC 2020
Publisher: Ragnarok Mutambo, LLC
Rune II mutambo mutsva unouya muna 2020 uyo unofuridzirwa neiyo yekutanga Rune kubva 2000. Kana iwe waona mamwe maViking akagadzirirwa kurwa mitambo pane iyi runyorwa uye akafadzwa ipapo Rune II ingangodaro ichadzikisa chikepe chako futi.
Iyo yakaiswa mune yakashata Norse zvakasikwa panguva yeViking kupera kwemazuva. Kurwira kunotyisa kwekupona kuri kuitika uye iwe wakasarudzwa nevamwari kuti uchengetedze Midgard. Iwe uri kupesana neanonyengera Loki uye acharwa mauto ake ari ega kana neshamwari.
Type: Kutanga-munhu chiitiko mutambo
Deathloop ndeyekutanga-munhu chiito mutambo kubva pachakafanana timu kuseri kwekunyadziswa uye Prey. Uye iwe unogona kuwana vibe kubva kune iyo uchitarisa iyo trailer.
Deathloop anotakura vatambi kuenda kune iyo isina mutemo chitsuwa cheBlackreef mukutambudzika kusingaperi pakati pevaviri vanoshamisa mhondi. Iwe unenge uri kuvhima tarits pasi kwese kuchitsuwa uku uchiedza kunzvenga rufu.
Type: Chiito-chiitiko chemutambo
GhostWire: Tokyo mutambo mutsva wekutamba neTango Gameworks uko vatambi vanozoiswa pachinangwa che "kurwisa vavengi vanoshamisa uye kubvisa guta rechisimba chakashata".
"Mushure mekunyangarika kusinganzwisisike kwakabata huwandu hwevanhu veTokyo, zviri kwauri kuti ufunge nezvekunzwisisa uye ubvise guta rechakaipa chitsva. Uine mano ako asingazivikanwe ekuona, uchatarisana nemashiripiti, usingafungiri mazano uye uchaziva ngano dzemumaguta zvisina kumboitika. ”
Hatizive zvimwe zvakawanda nezve mutambo uyu parizvino, asi zvirokwazvo zvinoratidzika zvinonakidza.
Gedhi reBaldur izita rakada kufanana nemitambo-yekutamba mitambo. Chechitatu kubuda kwemutambo uyu urikuumbwa neLarian Studios, timu iri shure kweUMwari: Chivi Chekutanga. Hatina kuburitswa panguva ino asi isu tinoziva zvinhu zvishoma nezvemutambo mutsva.
Izvo zvichange zvakavezwa neDivity 4.0 injini uye ichave ne "yakajeka, nhoroondo yeminema" inovimbisa kukuunza iwe pedyo nevatambi kupfuura nakare kose. Mutambo wakagadzirirwa kuve runako, zvakanyanya zvekuti vanokudziridza vacho akaudza Eurogamer izvo zvekunyaradza parizvino zvaisakwanisa kuzvibata.
Zuva rekuburitsa: tsva
Kupandukira kuri kutora iyo inozivikanwa Sniper Elite franchise mune yechokwadi chaiyo ne Sniper Elite VR. Uyu mutambo mutsva wakagadzirirwa kuratidzira mushandirapamwe mutsva muItari, yakasarudzika yekutanga-munhu maonero, rusununguko rwekufamba uye yekirasi X-ray kuuraya cam zvakare. Zvinofanira kunakidza!
Kukwirira: Rekusingaperi Realm
Publisher: Vadivelu Comedy Bluehole Studios
Kubva kuvagadziri veMitambo Nzvimbo Dzisingazivikanwe Hondo dzinouya chimwe chinhu chakasiyana zvachose. Iyo MMORPG ine madragoni, masimba makuru emhepo, akawanda, akawanda kuputika uye nezvimwe zvakawanda. Izvo zvinotaridzika zvisinganzwisisike, asi isu tichafanirwa kumirira uye kuwona.
Maminitsi gumi nemaviri
Type: Chakavanzika chinoshanda
Publisher: Annapurna Inoshanda
Makumi nemaviri mairi "anonakidza anodakadza" kwaunotora chinzvimbo chemurume anozowana akatsamwa munguva yekudyira mushure mekudya kwemanheru nemudhara nemukadzi wake zvinoshanduka kuita hope dzakaipa.
Pasina yambiro, mupurisa anopwanya kupinda mumba mako, achipomera mukadzi wako mhosva yekuuraya nekukurova iwe kusvika pakufa. Kana zviitiko zvatanga zvese zvakare, iwe unofanirwa kutsvaga nzira yekuchinja mhedzisiro usati watarisana nerumwe rufu runorwadza. Uyu mutambo zvechokwadi unonzwa sekusanganiswa kweiyo Shining uye Memento, saka inofanirwa kugadzira chinotyisa mutambo wezviitiko.
Zvivakwa zvine manzwiro zvakare!
Type: Kuvaka sim
Publisher: Unganidza Mitambo
Kana iwe uchida kuvakwa kweguta sims asi uchidaro chimwe chinhu chitsva, chitsva uye chinonakidza saka izvi zvingave izvo. Ichi chiitiko chisina kujairika umo zvivakwa "zvinogona kufamba uye kutaurirana" zvine tariro yavo uye kutya uye manzwiro avo zvakare.
Basa rako harisi rekuvaka guta rako chete asi kumisa zvivakwa zvako kuti zvisafe. Bet hauna kumbofungidzira kuti iwe unonzwa uine mhosva nezvekuparadza chinyakare chakavhiringidzwa hovel? Iwe uchaita izvozvi.
Ndine chinhu cheVikings? Nakidzwa yakanaka Hondo Royale mutambo? Kufudzwa nekuvanda mugwenzi wakamirira kudya kwehuku? Ipapo panogona kunge paine nhau dzakanaka muchimiro cheValhall - wekare mediki uye wekutanga-munhu kuki 'n' kurova nehondo Royale twist. Vimbiso ye "yakadzika" melee kurwa uye akanakisa Viking hondo dzakakwana kuti isu tifare.
Iyo yazvino terevhara yeValhall inoratidza imwe inoshamisa kurwisa kurwisa uye yakawanda yakanaka ol 'Viking inonakidza.
Quirky, gory uye inotyisa inotaridzika FPS yakaiswa mune imwe nzvimbo yakasikwa mumoyo weSoviet Union. Vatambi vachatora pachinzvimbo chomumiriri akasarudzika akatumirwa chinhu chakavanzika uye ari kuedza kuyedza kuongorora zviri kuitika. Zvisikwa zvinoshamisa, marobhoti uye huwandu hwezvombo zvinogadziriswa zvechokwadi zvinoita kuti iyi iite seinonakidza kana pasina chimwe chinhu.
Dehenya & Mapfupa
Type: Multiplayer pirate ushingi
Kutenda kwaAassassin: Nhema yakaratidza kunakidzwa chaizvo uye yakasiya kufarira mukupamba-kwakavakirwa mashenanigans pamakungwa makuru. Kubva ipapo, takaona Gungwa Mbavha uye kunaka kwe Bhurukwa asi dehenya reUbisoft & Mapfupa ari kugadzira mafungu mukuvaka-kumusoro kuvhura Iva pirate kaputeni iwe wagara waida kuve uye kurwira pamakungwa akakwirira iwe wega kana uine vanosvika vashanu vamwe vatambi. Girisa gangplank uye gadzirira mainsail, ichi chokwadi chichava chinobwinyisa grog-swilling romp.
Type: Nzvimbo-yakavakirwa MMO
Starbase inzvimbo itsva-yakavakirwa MMO kubva kuFrozenbyte. Iyo yakagadzirirwa kuratidza yakazara zvakasarudzika uye isingagumi kuwedzera chisiko. Izvo mukati mayo inonzwika seyakajeka pasi inotyisa hazviti? Mutambo uyu une chekutarisa pakuvaka masportship uye nzvimbo nhepfenyuro neusanganiswa hwekutsvagisa, kuunganidza zviwanikwa, kuumba, kutengesa nezvimwe.
Nzvimbo inoparara yakazara neine hukadzika fizikisi inofanira kuita kuti zvinhu zvinakidze sechinhu chakareruka sekukasira nekukurumidza kumhanya kunogona kubvarura ngarava.
Sherlock Holmes Chitsauko Chekutanga
Type: Detective kushanya
Kubva kuvagadziri vemutambo wakanaka weSherlock Holmes kunouya yakavhurika-yepasirese yekutsvaga nzvimbo kwauchatamba semudiki Sherlock Holmes achitsvaga kufa kwaamai vake. Vagadziri vacho vanoti kuchave ne "kushoma kubata" uye iwe uchave wakakwanisa kuti munhu wese munyika abatsire pakuferefeta kwako, kunyangwe kana kuri kungobvunza nzira.
Vanamwari & Zvikara
Gods & Monsters mutambo mutsva uri kuiswa pamwechete nechikwata chiri kumashure Assassin's Creed Odyssey. Iyo yakanaka mutambo wemuvara wepamhepo apo iwe uchange uri kune chinangwa chekuchengetedza vamwari veGreek uku uchigadzirisa mapuzzle uye kurwisa vavengi vanouraya munzira.
“Kubva kuvasiki veAssassin's Creed Odyssey kunouya chinyorwa chebhuku remutambo nezvegamba rakakanganikwa mukuda kuponesa vamwari vechiGreek. Simuka parwendo rwekuenda kuchitsuwa cheVakaropafadzwa, kunotorwa nezvisikwa zvine ngozi zvengano. Ratidza umhare hwako hwegambare nekutora mutungamiri wavo, Typhon, the monster theest in all of mythology in the face-off for the age. Tarisa nyika yakanaka yekufungidzira uko mapundutsi ekunyepedzera, mapundu asinganzwisisike uye manenji emhare akamirira. Rwendo rwacho ruchaoma uye rwunobatsira seyokupedzisira nzvimbo. Iwe uchave Gamba renhetembo dzakafanotaurwa? "
Type: Chiitiko-chirevo / RPG
Ungaite sei kana iwe ukazozviona wakadzika kusvika paminiti saizi ipo miti yakangoerekana yaita kukura kwematehwe uye kunyange mashizha akareruka ehuswa hweshongwe pamusoro? Ndiyo nyika yeChidikidiki uye zvinoshamisa zvinomirira zvakamirira kusanganisira kumhanya kubva pamapakeji emitero, kuyedza kurarama munyika inoshamisa uye kunyange kutasva ma wasps kunge mapundu. Zvinonzwika zvinoshamisa.
Kunze Kwekusvikira: Pfuma Royale
Type: Yakakura vakawanda vakawanda pirate Hondo Royale
Nguva dzose wakawana yemazuva ano Hondo Royale mitambo kuva kushomeka mune rum, swashbuckling uye gungwa shenanigans? Ipapo Kunze Kwekusvikira: Pfuma Royale inogona kunge iri yako.
Mutambo uyu unorongedza makumi mazhinji emapirisiti evatambi kurwisa mumwe neumwe achirwa mhiri kwemakungwa, kuburikidza nezviwi zvehuswa nezvimwe. Ehezve, kunge uri mutambo wePirate, pachave nepfuma, hondo dzechikepe uye yakawanda yerum zvakare.
Type: Tech-noir chakavanzika chekunakidza
Publisher: Raw Hasha
Iyo Signifier yakagadzirirwa kuve inonakidza tech-noir sirivhi yekushanya iyo iwe unozadza mabox aFrederick Russell, muongorori kuseri kwekupokana kwakadzika kwehuropi scanner iyo inobvumira vashandisi kuti vaone zvakanyorwa zvakanzwisisika uye kusaziva kwechokwadi kwepfungwa. Tinotarisira humwe hunhu-hwekufunga kwepamoyo neiyi.
Publisher: Mafuta Imbwa mitambo
Dhet uye inotyisa, Muviri weZviratidzo unoisa iwe mune shangu dzeakafa nyanzvi yekurasa muviri. Iva Winston Wolfe - kuviga miviri uye kuchenesa zvakashata zvisati zvaonekwa nemumwe munhu. Nguva yakatarwa uye rurimi-mu-beche pfungwa yekuseka inofanira kuita iyi yepamusoro-soro chortle.
Zvinonzwa senge Biomutant anga ari mumabasa kwenguva yakareba zvakadaro. Asi kana iwe uchinetseka budiriro yamira, fret kwete nekuti trailer nyowani yakadonha uye ane maminetsi akareba zvakare.
Kana iwe usingazivi nechekare, Biomutant ndeye yakavhurika-nyika chiitiko RPG inoita kunge yakazara bhomba. Tine titchy madiki playable mavara anotiyeuchidza nezve Rocket kubva ku Guardian's yeGreen uye inotyisa magirafu uye Gameplay, uyu zvechokwadi achave akanaka.
Biomutant, sezvaungave wakaunganidza kubva kuzita, ichabvumira vatambi kuti vasanganise masimba ekuchinja, bionics uye zvombo kugadzirisa ivo mavara avo mune iyo yekupedzisira gamba kana villain. Iko kuguma kwenyika kuri mumaoko ako.
Type: MMO mauto-based wekutanga-munhu kupfura
Kunyoreswa iri muchikamu chekutanga chebudiriro iye zvino, asi inotaridzika zvakanaka ichivimbisa. Kunyanya zvakanyanya kana iwe wakaridza hilarious Cuisine Royale, iyo yakavakirwa kure iyo imwe injini uye dhizaini. Kunyoreswa iHondo Yenyika yechipiri yakavakirwa MMO shuvhi neatambi anotamba pachisimba chayo. Mutambo uyu unovimbisa kurega vatambi vachirwa mune imwe yakakosha uye inozivikanwa hondo dzeWW2 inotarisisa nezvechokwadi uye nhoroondo yezvazvakaitika.
Zuva rekuburitsa: January 2021
Type: Stealth kupfura
Publisher: IO Inoshanda
Hitman 3 yakadzika semhedzisiro yemateedzano uye uchaona Agent 47 ichidzoka kune yayo yakajairika antics mune sandbox kuuraya mutambo. Mumiriri 47 achasangana nebasa rake rakakosha iye zvino uye neese akajairwa asina kusarudzika mutambi sarudzo uye kutsiva sarudzo dzenhau zvakare. Mumwe kutarisira.
Kana iwe wakambozvibvunza kuti zvakamira sei kuva munhu wekutakura uye kupusa uye kupenga zuva ravo rekushanda rinofanira kunge riri. Ipapo mutambo uyu unogona kunge uri nzira yakakwana yekuziva. Huye, zvaizove kana isu taigara pasirose yenyika bonkers ragdoll fizikisi uye yakajeka ruvara.
Funga kuti iwe unogona kuita basa riri nani kupfuura rako rekaresa rekutakura sevhisi uye kuwana pasuru kune vanogamuchira pasina dambudziko? Ino ndiyo nguva yako yekuedza.
Musana ndeyekusanzwisisika uchitarisa indie mutambo neye retro pixel visidhi uye yakadzika se "noir-inofemerwa Detector yekushambadzira". Vatambi vachatora chinzvimbo chaHoward Lotor, ziso rakazvimiririra rrocon iro riri kubuda zveshuwa, kuunganidza humbowo uye kuongorora nyika yakamupoteredza. Pane chimwe chinhu chinokurudzira pamusoro peichi uye tinoshamiswa kuona kuti zvinopera sei.
Warhammer 40,000: Rima
Type: Kubhuroka uye Slash
Warhammer 40,000: Darktide yakaiswa se "visceral" ina-mutambi co-op mutambo mutambo ine huwandu hune hutano hweFPS chiitiko zvakare. Nhoroondo dzakatetepa asi iri kugadzirwa nechikwata chiri kuseri kweVermintide inozivikanwa saka inofanira kunge iri kuputika.
Type: Vavaki veguta / Isu Sim
Maindasitiri eTitan akaiswa kuve nhabvu inonakidza yekuvaka guta sim / zano mutambo wakaiswa pane Saturn mwedzi weTitan. Nerudo nehunyanzvi timu imwechete yakaunza isu Crypt yeNecroDancer, mutambo uyu unovimbisa kuti uchaita kuti uvake metropolis yakakura kubva kutanga.
Wakambozvibvunza kuti hupenyu hwemutyairi weTaxi hungave hwakaita sei? Zvakanaka, usashamisazve sezvo iwe uchakurumidza kutora iyo basa uye slog nzira yako kuburikidza nemazita.
Type: Ndege Simulation / Chiito
Publisher: Chikamu D2
Project Wingman akatanga hupenyu saKickstarter uye parizvino ari mukusimudzira semutambo wetsiva wekutiza uyo unoisa mu cockpit yejetti yekurwira yepamusoro. Tarisira zvese kubva zvakadzika ndege dzemuchadenga kusvika pamwero wakakura wekurova misheni nezvimwe.
Elden Ring ndiyo mhedzisiro yekudyidzana pakati paGeorge RR Martin (munyori we Game of Thrones) uye KubvaSoftware (timu iri kuseri kweRima Mweya). Sanganisa izvo zivo neyetrailer uye iwe unowana zano remutambo une hutsinye uye hwakaomesesa wakaoma kuuya pane imwe nguva mumakore mashoma anotevera.
Isu tingafungidzira izvi zvichange zvichiranga, zvakanaka uye nyaya-yakapfuma. Zvirokwazvo, mumwe wokutarisira.